“नउघ्रेको जून” | Emedia Hub UK
Home Literature Katha “नउघ्रेको जून”
कथाकार:- जानू काम्बाङ्ग लिङ्ग्देन
ताप्लेजुङ्ग हाल युके
प्रेम, यो कसैले जानेर या चाहेर हुने कुरै होइन । मान्छेको मनमा आफँै, अनायासै उत्पन्न हुने एक तृष्णा हो । अन्तध्र्वनिबाट तरङ्गित भैदिने मिठो आभास हो । हरेक प्राणी या चिजसँग प्रेम गाँसिन सक्छ । बलेँसीमा रोपेको फूल अनि वस्तुभाउसँग पनि त प्रेम सम्बन्ध हुनसक्छ । मान्छे–मान्छेबिच मर्यादित साइनोपातको पनि प्रेम सम्बन्ध हुन्छ, यो पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, जीवनको मनको ढोका भने सबैभन्दा बेग्लै किसिमको प्रेमभावले ढकढक गर्न थालेको छ ।
विकासको उज्यालो बाटोतिर लम्किँदै गरेको फिदिम बजारको प्रहरी थानामा भर्खर–भर्खर सरुवा भएर आएको एक प्रहरी जवानको नाम हो, जीवन । बजारको पुछारमा कारागारमाथि हाइस्कुल हुँदै शिवालय मन्दिर भएर टुङ्गिन्थ्यो फिदिम बजारको नक्सा । हरेक हप्ताको शनिबार कारागारअगाडि लाग्ने सप्तमी बजार मोटर गुड्न थालेपछि भने माथि शिवालय मन्दिरको प्राङ्गणमा सरेको थियो । पाँचथर फिदिमका विभिन्न गाउँहरूबाट त्यहाँ फलफूलका साथै अन्य विविध खाद्यसामग्रीहरू आउँथे । फिदिम बजारमा बस्नेहरूको किनमेल गर्ने मुख्य ठाउँ नै सप्तमी र जोरसाल बजार थियो ।
जीवन विगत सात महिनादेखि कारागारमा ड्युटी गथ्र्याे । हरेक बिहान आफूभन्दा ठूलो तामाको गाग्रो बोकेर एउटी फूलजस्ती राम्री केटी धारोमा पानी भर्न आउँथी । त्यो धारो कारागारको ठिक अगाडि चारबरे सडक र कारागारको बिचमा थियो । झलक्क हेर्दा चारबरेबाट पनि प्रस्ट देखिन्थ्यो । कारागारबाट त झन् नदेखिने कुरै भएन । ऊ सधँै स्कुल पोशाकमा हुन्थी । उही नीलो ग्यालीवाला जामा अनि सेतो टिसर्ट । मान्छे राम्री, सानी, गहुँगोरी थिई । आफ्नो सर्टको बहुला कति न काम गर्नेजस्तै गरी फोल्ड गरेर सुर्काएकी हुन्थी । कुनै बेला धारामा निकै भिड हुँदा चुप्प लागेर आफ्नो पालो कुर्थी । जब ऊ धारामा आउँथी, त्यसपछि उसलाई हेर्ने ड्युटी पनि थपिन्थ्यो जीवनको । किन हो किन, उसलाई हेरिरहँदा आनन्दित हुन्थ्यो जीवनको मन ।
त्यस धारामा पानी लिन अनेक थरिका मान्छेहरू आउँथे, जान्थे । जीवनको आँखाले उसैलाई किन गोल ग¥यो ? थाहा थिएन । अनभिज्ञ थियो ऊ स्वयम् । एकदिन पनि ऊ त्यहाँ नआउँदा निकै छटपटी हुन्थ्यो जीवनलाई । मनमा असन्तुष्टि पैदा भएको भान हुन्थ्यो । नुनबिनाको तिहुन खाएझँै दिन खल्लो लाग्थ्यो । कहिल्यै कुनै संवादबिना पनि यति गहिरो प्रेम कसैसँग हुँदोरहेछ ! प्रेमको यही अजीब स्वरूप सम्झेर छक्क पथ्र्याे जीवन ।
अब त उसलाई सपनामा पनि देख्न थालिसकेको थियो ऊ । ड्युटी अफ हुँदा पनि कारागारमै बसिरहूँजस्तो लाग्थ्यो । जीवन विस्तारै चङ्गाको धागोझँै खिचिँदै गइरहेको थियो, एउटी अपरिचित फुच्चीको प्रेममा । कहिलेकहीँ कराएर उसको नाम सोध्न मनलागे पनि सकिरहेको थिएन । कारागारको माथिल्लो बरन्डामा उभिएर फिदिम सहर सिङ्गै नियाल्न सकिन्थ्यो । ऊ त्यस फुच्चीलाई त्यहीँ उभिएर हेर्न लालयित हुन्थ्यो ।
जीवनले मनमनै हिसाब गथ्र्याे– सायद, पन्ध्र–सोह्रकी कल्कलाउँदी हुनुपर्छ, म २३ नाघ्न लागेको युवा…! प्रायः यसरी नै मनको लड्डु घ्युसँग घुटुघुटु निलिरहन्थ्यो ऊ ।
उसको नाम थाहा नभए पनि आफँैले उसका लागि एक उपनाम रोज्यो अनि आफैँ मिठो गीतझैँ गुन्गुनायो फुच्चु ! फुच्चु, आज त्यो फुच्चु किन आइन पानी लिन ? कहिल्यै एक वचन बोल्न पाएको थिएन । उसलाई हेरेरै भए पनि एक अचम्मको आनन्द मानेर तलतल मेटिरह्यो जीवनले ।
शुक्रवारको दिन थियो । त्यही पुलिस थानामा जागिर खुलेको हल्ला सुनेर एउटा ठिटो फारम भर्न आएको रहेछ । एकछिनको कुराकानीपछि चिया खाने सल्लाह गरी जीवन र त्यो युवक नजिकैको एउटा होटेलमा पसे । त्यहाँ जीवनले अनौठो दृश्य देख्यो । जुठा भाँडाकुँडाको थुप्रोमा उही सपनाकी परी फुच्चु…भाँडा माझ्दै थिई । जीवनले बल्ल थाहा पायो कि फुच्चु त होटेलमा काम गर्ने केटी पो रहिछ । अचम्मको कुरो आज पनि उसले स्कुलको उही पोशाक लगाएकी थिई ।
टेबलमा बस्दै जीवनले अचम्मित पारामा त्यही रछान र फुच्चुको क्रियाकलाप हेर्न थाल्यो । भित्रबाट साहुनीले बोलाइन्, “इच्छा यहाँ आइज त । यहाँ दादाहरूलाई दुई कप चिया बनाइदे ।”
बाहिरको चुलोमा साहुनी रक्सी पार्दै थिइन् । भित्रको चुलोमा ठूलो भाँडामा मासु पाक्दै थियो । मासुको बास्नाले सडकतिर हिँडिरहेका मान्छेलाई समेत मोहित तुल्याउँथ्यो सायद ! त्यसैले होला, अरूले पनि यहाँ मासु चिउरा पाइन्छ भन्दै सोधिरहेका थिए ।
फुच्चीलाई हेरेर सजिलै अन्दाज गर्न सकिन्थ्यो कि ऊ त्यस दोकानकी अभिन्न अङ्ग नै हो । लाथ्यो, ऊ धेरै जाँगरिली र मिहिनेती छे । यति सानै उमेरमा यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्नु कठिन मात्र होइन, असम्भवजस्तै
लाग्थ्यो । बाहिरतिर ऊ जस्तै र ऊ जत्रै उमेरका एक हुल केटाकेटीहरूले डण्डीबियो खेलिरहेका थिए भने कोही स्कुलको लुगामा ठाँटिएर हातमा किताब बोकी सङ्गीहरूसँग जिस्किँदै हाँस्दै हिँडिरहेका थिए ।
सुँगुरका लागि चाराकोे तयारी गर्दै साहुनी फेरि कराइन्, “एक आरी भुस ले त इच्छा ।” एउटा स्टिलको ठूलो भाँडा बोकेर फुच्ची स्टोरतिर भुस लिन जाँदाजाँदै उसको नजिकै साथीहरूले खेलेको डण्डीबियो उफ्रेर आयो । एक नजर पुलुक्क हेर्दै टिपेर उतैतिर मिल्काई । जीवन सोच्दै थियो, “यो संसार कस्तो बिचित्रको ? खेल्ने उफ्रिने उमेरकी सानी केटी, होटलको एक जिम्मेदार कामदार !”
फुच्चीको गरिबी र जाँगर नै उसको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो क्यारे । एकछिन बस्नु त के, उभिएको पनि देखिँदैनथ्यो । सारै खुल्दुली लागेर बाहिर निस्कियो जीवन । जुठेल्नानेर ठूल्ठूला भाँडा, डेक्ची, कराही आदि फुच्चीकै कामका लागि थाती राखिएका थिए । ऊसँग त केही बोल्न सकेन जीवनले तर रक्सी पार्दै गरेकी साहुनीलाई भने सोध्यो, “हजुरहरूको घर कता हो दिदी ?”
साहुनीले भनिन्, “इलाम हो भाइ ।”
“ए, हो र ! ओहो, तपाईहरू त छिमेकी पो हुनुहुँदो रहेछ, म पनि इलामको सिमानामै पर्ने झापाको मान्छे त हुँ नि !” जीवनले एकैपल्ट सासै नफेरी भन्यो ।
“ए…, अनि यहाँ कहाँ हुनुहुन्छ ? पहिले त देखेजस्तो लागेन त भाइ ?” साहुनीले पनि अपरिचित जीवनका बारेमा अलिकति चासो राखिन् ।
“हजुर दिदी, म यहाँ भर्खर सरुवा भएर आएको हुँ । थानामा कार्यरत छु,” जीवनले जवाफ दिँदै भन्यो ।
“अनि यी बहिनी नि ! तपाईंकी छोरी ?” जीवनले जिज्ञासा र प्रश्न एकैसाथ तेस्र्यायो ।
“होइन भाइ, मैले काम गर्ने राखेको ।”
साहुनीको यस उत्तरमाथि केही प्रतिप्रश्न गर्न मन भएर पनि जीवनले ए…, मात्र भन्यो । उत्सुकता अझै मेटिएको थिएन । तर पनि ऊ चुप लाग्यो । जीवनको साथी हेमन्तले पैसा झिकेर तिर्न खोज्यो, जीवनले झटपट हेमन्तको हात पन्छाएर पैसा आफूले तिर्ने अभिप्रायसहित साहुनीतर्फ इसारा ग¥यो । साउनीले लुङ्गीमा हात पुच्छ्दै रमाइलो पाराले भनी– “होइन भाइ, दुवैको पैसा धेरै भएको हो भने मैले राखिदिन्छु नि !”
एकछिन तीनै जनाको हाँसोले होटलका साना–साना कोठाहरू थर्किए ।
होटलमा अब मान्छेहरूको भिड बढ्न थालेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूको खाना खाने बेला भएको रहेछ । ढोकाबाट निस्कंदै जीवनले एकजनासँग हात मिलाएर सोध्यो, “खाना सर ?”
“हजुर, अनि सरको आज छुट्टी ?” त्यस मान्छेले पनि जीवनलाई सोध्यो ।
“हजुर,” यति मात्र भनेर जीवन हिँड्यो । हेमन्त पहिले नै पर…सडकमा पुगिसकेको थियो ।
साथीसँग छुट्टिएपछि जीवन कोठामा पुग्यो । अरू केही गर्न मन नलागेकोले एउटा किताब लिएर बरन्डातिर लाग्यो । भोलिपल्ट बिहानै ६ बजेबाट ड्युटी गर्नु थियो । खासमा उसको छुट्टी त भोलि थियो तर एकजना साथीको घरमा श्रीमती बिरामी हुँदा ड्युटी साँटेको थियो । त्यतिबेला साथीले– “तपार्इंको त के छ र सर, एक्लो मान्छे जहिले बसे पनि ठिकै छ नि !” भन्दा त झन्डै रिस पनि उठेको थियो तर अहिले छुट्टी उपलब्धिमूलक रहेको अनुभव गरेर जीवन सुत्नतिर लाग्यो ।
जाँड–रक्सी खाने बानी थिएन जीवनको । छुट्टी हुँदा पनि घरमै बसेर किताबहरू पढ्दै बस्ने गथ्र्याे । दिक्क लाग्दा खोलातिर झथ्र्याे । पौडी खेल्ने, घुम्ने, घाम ताप्ने उसका सौखका कुरा थिए । एकदिन खोला झर्ने क्रममा जीवन र उसको एकजना साथी थानामुनिको उकालोमा २, ३ जना केटीहरू काँचो सखुवाको दाउरा सकीनसकी बोकेर आउँदै गरेको देखियो । थाना पछाडिको गेट हुँदै ओरालो बाटोमा तिनै केटीहरूको नबुझिने आवाज सुनियो । उनीहरू भारी बिसाएर थकाइ मार्दै बसिरहेका रहेछन् । त्यही हुलमा जीवनले फेरि देख्यो फुच्चीलाई !
जीवनलाई कस्तो कस्तो भएर आयो । उसलाई देख्नेबित्तिकै टपक्कै टिपेर लैजान मन लाग्यो । मान्छे यति राम्री, सुहानी थिई कि जीवनले अहिलेसम्म यति मायालु अनुहार र मिलेको जिउडाल अन्त कतै देखेको थिएन । उसले त्यस दिन स्कुलको त्यो ग्यालिवाला जामा भने लगाएकी थिइन । रातो र पहेँलो बुट्टा मिस्सिएको नाइलनको जामा लागएकी थिई । जामा निकै पुरानो भए पनि सफा थियो । ऊ राम्री भएरै त होला, साह्रै सुहाएको देख्यो जीवनले । आजसहित दुई पटक यति नजिकबाट देख्न पाएको को उसले फुच्चीलाई ।
जिस्किने नियतले मौका छोपेर जीवन फुच्चीको नजिकै गएर बस्यो । गाला राता भए फुच्चुका । जीवनले गाला तातेका दृश्यमा मात्रै देखेन, फुच्चीको सर्वाङ्ग लजालु भावको आफैँले पनि अनुभव ग¥यो । कता कता माया लागेर आयो उसलाई । फुच्चीलाई त्यत्तिकै छाडेर अरूहरूलाई बोलाउन थाल्यो, “हेर, तिमीहरूले यस जङ्गलको काँचो दाउरा काट्यौ नानी हो, त्यसैले समात्न आ’को हामी । तर्साउने नियतजस्तो देखाएर रेला ग¥यो जीवनले । फुच्चीसँगै भएका अरू दुईजना चुप लागेनन्– “हामीलाई थाहा छ के, तपार्इंहरू वन जाँच्ने होइन !”
एउटीले त्यसो भनिरहँदा अर्की खित्तिएर हाँसी । जीवन र उसको साथी उल्टै पजल भए ।
जीवनको साथीले कुरो मिलाउने कोसिस गर्दै कुरो अन्तै मोडिदियो– “नानीहरूले कत्रो–कत्रो भारी बोकेका, त्यो पनि काँचो ? कति उमेर भयो हँ…तिमेरूको ?”
एउटीले फुच्चीलाई देखाउँदै भनी–“ऊ सोह्र वर्षकी हो । म र उः अर्की चाहिँ पन्ध्रकी ।”
“तिमीलाई त सबैको उमेर थाहा रै’छ त ! कि सबैकी आमा तिमी ?”
लाजले राती भई ऊ ।
अर्की बोली– “होइन, हामीसँगै पढ्छाँै नि त, त्यसैले थाहा भा’को के ।”
उसको कुरोमा कत्ति पनि छलकपट थिएन ।
“अनि, कति कतिमा पढ्छौ त ?” साथीले प्रश्न सोधिरह्यो ।
छेउकीले भनी– “इच्छा आठमा, मन्जु र म सात कक्षामा ।”
“हो र ? तिमीहरू स्कुल पनि जान्छौ ?” अब जीवनले गिज्याझैँ गरी प्रश्न तेस्र्यायो ।
सबैले हेराहेर गरे । अनुहार राता राता भइसकेका थिए । इच्छा सधैँ स्कुल पोशाकमा देखिनुको रहस्य पनि खुल्यो आज ।
“यी इच्छा भन्ने बहिनीचाहिँ बोल्दिनन् कहिल्यै ?” उसको बोली सुन्ने रहर धेरै दिनदेखि पालेको थियो जीवनले । आज सम्भावना देखेकोले मौका छोपेको थियो उसले ।
“बोल्छ है ।” अर्कीले कुरो थपी ।
जीवनले भन्यो– “खोई त बोलेको ? तिम्रो घर कहाँ हो ? इच्छा नाम पनि साह्रै मनप¥यो मलाई त ।” अलिकति प्रशंसाको भाव मिसाएर थप प्रश्न ग¥यो ? उसले हल्का अनुहार उचालेर हेरी तर बोलिन । छेउकी साथी मंन्जुले इच्छाको घर धनकुटा भएको जानकारी दिई । बिचैमा जीवनको साथीले कुरा थप्यो, “होइन, तेत्रो टाढाको मान्छे कसरी यहाँ नि ?”
मन्जुले भनी, “इच्छाको बाबा नेपाली सेनामा जागिर गर्नुहुन्थ्योे !”
“अनि अहिले चाहिँ जागिर गर्नुहुन्न र ?” जीवनले उत्सुकतापूर्वक प्रश्न ग¥यो । फेरि कुरो बिचैमा काटेर मंन्जु बोली, बित्नुभो अहिले त !”
अर्को साथीले पनि सोध्यो, “अनि इच्छाको परिवारमा आमा, अरू भाइबहिनी कोही छैनन् ?”
“अहँ, छैनन है ।” मन्जुले नै भनी ।
“अनि पो तिमी त्यहाँ होटलका काम गर्न बसेकी ?” जीवनले इच्छालाई सोध्यो । तर, इच्छा भने एक वचन बोलिन, अवाक् भएर हेरिमात्र रही ।
“लौ हेर, यी केटीहरू त अहिलेसम्म यहीँ पो बसेका रहेछन् ! लु हिँड छिटो !” कसैले बोलाएको आवाज सुनेर केटीहरू आ–आफ्नो भारीतिर लम्के । जीवन र उसको साथी पनि ओरालो लागे ।
इच्छाको यो कस्तो अनौठो भोगाइ, कस्तो कहानी ! उसका बारेमा अझ धेरै कुरा जान्ने उत्सुकता जाग्यो जीवनको मनमा । एकछिन पौडिएर नदीबाट निस्केपछि ढुङ्गामाथि आकाश हेर्दै पल्टिरह्यो । उडिरहेको बादलभित्र थुप्रै चिज देख्यो उसले । बादल बादलको मिलन र बिछोड देख्यो । आकाशको छाती कोपर्दै रकेटहरू उडेको देख्यो । घाम क्षितिजसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै न्यानो राप निकालेर धर्तीलाई सेकिरहेको थियो । आकाश र धर्ती बिचको सुमधुर प्रेम सम्बन्धलाई जोगाइराख्ने ती अदृश्य प्रकृतिसँग जीवनले पनि एक नमिठो गुनासो पोख्यो । वनजङ्गल सबै सधँै किन सँगसँगै हुन्छन् ? हामी मान्छेले चाहिँ मन परेको मान्छे सजिलै किन पाउन सक्दैनौँ ? यस्तै निरूत्तर प्रश्नहरू तेर्साइरह्यो मनभरि । जीवनकै गुनासो सुनेर होला चिसो सिरेटो उसको छाती सुम्सुम्याउन आएझँै लाग्यो । छेउको हरियो सरकारी टावेल तानेर कुम र छाती छोप्यो । त्यत्तिकैमा एक जोडी ढुक्कुर छेउको रूखमा बसेर जोर–जोरले पिरतीको गीत गाएको देख्यो । आँखा चिम्लेर उसले पनि फुच्चुलाई सम्झ्यो र तातो ढुङ्गालाई अङ्गमाल गर्दै आफ्नै मन कुत्कुत्याएर केही बेरका लागि रोमान्टिक बनिरह्यो ।
केही महिनादेखि एक्लै एकोहोरो प्रेममा पल–पल बिताइरहेको जीवनलाई विश्वास थियो कि उसको त्यो प्रेमले फुच्चुको छहारी पाउने छ । दोहोरो प्रेमको रङगमञ्चमा ऊ सजिएको हुने छ । त्यही एकदिनका लागि ऊ जिन्दगीभर पर्खन तयार थियो तर अरू कसैसँग बिहे गर्न तयार थिएन । उसको घरबाट बिहेका लागि दबाब आउन थालेको पनि थियो । यता जीवन भने फुच्चुकै बारेमा दिनरात कल्पेर बिताउँथ्यो । फुच्चु आफ्नो गरिबीलाई चिर्दै सधैँ भाँडा माझ्थी । फिदिमको उही सानो होटलको छाप्रोमा, उसका दिनहरू बितिरहेका थिए । समयको अभावले गर्दा गृहकार्य पनि स्कुलमै टिफिन र ब्रेक टायममा बसेर गर्थी रे भन्ने पोल मन्ंजुले नै खोलिसकेकी थिई । पढाइमा राम्रो भएकोले निःशुल्क पढ्दै छे भन्ने कुरा होटलकी साहुनीको मुखबाटै सुनेको थियो जीवनले ।
अब त जीवन हरेक छुट्टीको दिन पारेर केही नखाए पनि नानाको होटलमा जाने, आउने गर्न थालेको छ । फुच्चुको अनुहार पढ्न र बोली सुन्न जीवनको मन आतुर भइरहन्छ । नचाहँदा नचाहँदै फुच्चुको दुःख हेर्नु परेकोमा ऊ कहालिन्छ पनि । अनि, मनमनै उसैलाई प्रेमको प्यालामा राखेर घुटुघुटु पिउन थाल्छ । जीवनले पटपटी फुटेका उसका कलिला हातहरू देख्छ । पुष–माघको जाडोमा पनि खरानी र भुसले भाँडा माझ्नुपरेको छ । मालिक्नीको कन्जुस्याइँ यति बढेको छ कि कहिले साबुनसम्म किनिदिने होइन । उल्टै, चिल्लो नगए रक्सीको तातोपानीले धुन आदेश दिएको हुन्छ । ऊ चुपचाप लाग्छे, केही बोल्दिन । आफ्नो सारा बल लगाएर अनुहार जस्तै चम्किलो भविष्य बनाउन उसलाई पनि त मन छ नि…के गर्नु…! दिउँसोको खाना खाने समयमा त्यस होटलमा खुट्टा राख्ने ठाउँ हुन्न । कामको त कुरै नगरौँ… तर, इच्छा कहिले थाक्दिनन् । उसलाई काम अह्राएर कहिल्यै नथाक्ने उसकी होटल मालिक्नीलाई भगवान्सरि मान्ने इच्छाको स्वभावका बारेमा सोचेर जीवन जिल्ल पत्थ्र्यो ।
एक दिन बेलुकीको खाना खाने निहुँ गरेर एक साँझ जीवन नानाको होटलमा पुग्यो । तर त्यहाँ फुच्चु थिइन । यताउति हे¥यो कतै देखेन । सिधै उसको नाम लिएर सोध्न उचित ठानेन जीवनले ।
“नाना, दुईटा खाना बनाइदिनुस् न है ? आज यतै खाना खानुप¥यो, साथी पनि आएको छ ।” जीवनले साहुनीलाई भन्यो ।
“ए, हो र भाइ ! मेरो काम गर्ने केटी पनि सानिमाको घर गई,” साहुनीले भनी ।
“ए ..हो र नाना, कहिले गई नि ?” जीवनले नजानेझँै गरेर उत्सुकताका साथ सोध्यो ।
“उसको बाबा खोई कताको भिडन्तमा मारिएपछि उसकी आमालाई पनि लोग्ने मार्नेसँग बदला लिन सकिन्छ भन्दै उल्काएर माओवादीले जबरजस्ती जङ्गल पस्न बाध्य बनाएछन् । पछि विचरी ऊ पनि खोई कताको भिडन्तमा परेर मरी रे ! एक्ली छोरी टुहुरी छे भन्ने कुरा धन्न मैले थाहा थाहा पाएँ । दया लाग्यो, ल्याएर पालँे । अहिले काम गर्न सक्ने भएपछि उसका स्वार्थी आफन्तहरू लोभिन्छन् । भाइ, के गर्ने, यो दुनियाँको नियत यस्तै छ । कतिदिन बिजोक भएर एक्लै डेरामा बसेकी थिई विचरी, त्यो बेला कसैलाई मतलब थिएन ! अहिले म कहाँ बिहान बेलुकी काम गर्छे । दिनमा स्कुल जान्छे । पढाइ पनि राम्रो छ । बोलीमात्र नआएको हो । अँ, दिमाग त बहुत तेज पो छ त भाइ उसको । मैले राखेको नै झन्डै ८ वर्ष पो हुन लाग्यो त,” साहुनीले भनिन् ।
साहुनीको कुरो सुनेर जीवन छक्क प¥यो । साहुनीको मुख एकोहोरो हेरेर ऊ शब्दविहीन बनिरह्यो । बोल्दाबोल्दै साहुनीले दुई कप तात्तातो चिया टेबलमा राखिसकेकी थिइन् । जीवनको मन कताकता पुराना कुराहरूमा अल्झिरहेको थियो । होइन, यो इच्छा भन्ने बहिनीको बोलि आउँदैन र…? पहिले बाटोमा भेट्दा गरेको त्यो प्रश्नले कति चित्त दुख्यो होला उसको । सम्झेरै उराठ मान्यो जीवनले ।
“इच्छाको बोली आउँदैन, ऊ लाटी हो भन्ने कुरो बल्ल आज थाहा भयो हैन त भाइ !” एक्कासि साउनीको बोली सुनेर जीवनको तन्द्रा भङ्ग भो ।
“..हँ, हजुर नाना ?” तर्सेर भन्यो जीवनले ।
फेरि साहुनीले भनिन्, “तपार्इंहरूलाई अलि अबेला भए पनि हुन्छ भने म खाना बनाइदिन्छु ।”
जीवनले भन्यो, “हुन्छ नाना, फरक पर्दैन, मेरो भोलि पनि छुट्टी नै छ । साथी बिहान ४ बजेको बसबाट ताप्लेजुङ जाने हो ।”
जीवन कोठामै बसेर लेखपढ गरिरह्यो । धरानमा पढ्दै गरेकी बहिनीलाई र घरमा आमालाई दुईओटा चिट्ठी पोस्ट गरेर चोकमा एकछिन क्यारेम खेल्न थाल्यो । अस्ति भर्खर आएको आमाको चिट्ठीमा छुट्टी लिएर बिहे गर्न आइज भनेर लेखिएको थियो बिहे गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार दबाब आएकाले गएको छुट्टीमा पनि घर नगएर धरानमै फुफूको घरतिर बसेर छुट्टी सिध्याएको थियो जीवनले । जीवन एउटी फुच्चुको अनौठो प्रेममा फसिसकेको छ भनेर घरमा कसैलाई पनि थाहा थिएन । इभन, ऊसँगै काम गर्ने साथीहरूलाई यस विषयको पत्तो थिएन । उसको प्रेम, त्यो पनि एकतर्फी…पहिलो जन्मकी प्रेमिका ! सायद, यो जनममा भेटिएको हुनुपर्छ । सिनेमाको कहानीझैँ लाग्थ्यो यो कुरा जीवनलाई । कहिलेकाहीँ पत्याउनै नसकिने प्रेममा जीवनको जीवन, झन् कता–कता गहिराइमा डुब्दै थियो । हुन पनि इच्छा सारै राम्री थिइन् । एकदम अनौठो प्रकारको सुन्दरता थियो उनको । कतिपल्ट फुच्ची भन्दै सपनामा बोल्दा पल्लो पलङको साथीले एक हप्तासम्म पछ्याउँदै गिज्याएको नमिठो अनुभूति पनि कहीँ कतै मनमा मिठो गरी लुकाएर राखेको थियो जीवनले ।
धेरै दिनपछि नानाको होटलले तानेर फेरि त्यतै पु¥यायो जीवनलाई । कतै इच्छा नहुँदा त यी तन्देरी भाइहरू पनि होटलमा नआउँदा पो रहेछन् भन्ने पो सोचिन् कि नानाले भन्ने पनि सोचिरहेको थियो ऊ । टाढैबाट “नाना, दर्शन है,” भन्यो उसले ।
नाना घोप्टो परेर आगो फुकिरहको बेला परेछ । हल्का टाउको मात्र उठाएर “हजुर” मात्र भन्न सकिन् । नानाको आँखा रातो भएर सुन्निएको थियो । “के भयो नाना, सन्चो छैन कि कसो ?” जीवनले सोध्यो ।
उनले भनिन्, “खोई भाइ, के भनूँ, काम गर्ने मान्छे नभएको बेला इच्छालाई पनि नपठाउने कुरो गर्छन् रे ! विचरीको पढाइ पनि बिगार्ने भए अब । अर्काको नासो मैले भनेर पनि के हुन्छ र ?” जीवन खङ्ग्रङग भयो । बोली र होस दुवै गायब भयो उसको । फुच्चुलाई भेट्ने एउटा झिनो आशाको त्यान्द्रो पनि हिलोको कमलझैँ हिलोमै फुलेर हिलोमै झ¥यो अब त । त्यहाँ एकोहोरो रूपमा नाना मात्र बोलिरहिन् केके हो केके !
नाना फत्फताइरहिन् । जीवनले सुनिमात्र रह्यो– “कहिले त लाग्छ, त्यो केटीलाई एउटा राम्रो जागिरे खोजेर बिहे गरिदिन पाए पनि हुन्थ्यो ! विचरीको जीवन देखेर दया लाग्छ मलाई त ।”
“अनि नाना, उसको सानीआमाको घर कति टाढा छ नि ?”
“टाढा छ नि, चोक्मागुदेखि पर्तिर तिन्मौले डाँडा रे । खोई, दुई जना दिदीबहिनीमा यसकी आमा चाहिँलाई धनकुटा लगेका रहेछन् । बहिनी त्यहाँ रे । विचरी, हिजो आ’की थिई बिदा माग्न र लुगा फाटा लिन । जाने बेला म बेसरी रोई । पढाइ छुटेकोमा पिर मानेकी थिई । त्यसैले नरमाइलो लागिरहेको छ भाइ ।”
भित्ताको घडीले आज छ्याक्कछ्याक्क उसैलाई गिज्याएर खुचिङ्ग खुचिङ्ग भनिरह्यो । ननिदाएरै एक बज्यो । बिहान छिटै उठेर बुट टल्कायो अनि मेसमा पुगेर एक कप चिया पिउँदै एउटा पत्रिका क्यान्टिनबाट लिएर कारागारमा पुग्यो ।
“चिया पिउने सर ?” पत्रिकामा आँखा जोतेर बिथोलिएको मन डुलाउँदै बसिरहेको बेला छेउमा एउटा कालो कित्लीमा दूध, चिया बोकेर कारागारको बूढो पियन उभिएको रहेछ ।
“भो पिउँदिनँ आज,” कुन मुडमा यसरी जवाफ फर्कायो, उसैलाई थाहा भएन ….! बूढो एकछिन त जिल्ल प¥यो । फर्कीफर्की हेर्दै हाकिमको कार्यकक्षभित्र पस्यो । नजिकै कारागारमुनिको धारा निरन्तर बगिरहेको थियो । त्यो धाराको बगाइ सम्झिँदै निकै बेरसम्म फुच्चीको याद पनि बगाइरह्यो जीवनले ।
रातको १२.३० बजे अचानक क्वाटरमा एमर्जेन्सी अलराम लाग्यो । सबै प्रहरी जवानहरू उठेर गेटमा हाजिर भए । तिनमौले डाँडामा १५ वर्षकी एउटी केटीले आत्महत्या गरेको खबर आएको रहेछ । एक डफ्फा प्रहरी जिपमा बसेर बाटो लागे । फिदिम जिल्ला हस्पिटलका एक डाक्टर साहेब पनि थिए साथमा । बाटो हिलाम्य थियो । बल्लतल्ल गाडी चल्न थालेको फिदिम बजारका घरहरू भर्खरै बिहे गरेकी बुहारीले पोतेको अगेनाझँै रातो माटोले पोतिएका थिए । बाटो पिच बनेको थिएन । जाँदाजाँदै सम्दिन नपुग्दै ओदिन छेउको घुम्तीमा जिप भाँसियो । सबै ओर्लिएर बल्ल–बल्ल ठेलेर माथि निकाले । बलतल्ल सम्दिनको एउटा चिया दोकानमा पुगेर जिप त्यहीँ छाडी ३० मिनेट जतिको पैदल हिँडी तिनमौले पुगे ।
आँगन छेउको ठूलो आँपको ओह्रालो हाँगामा एउटा कुर्ताको हरियो सलले पासो लागेको तरुनी केटीको लास झुन्डिरहेको देखियो । घर–गाउँका छरछिमेकीहरू भेला भएर रोइरहेका थिए । गाउँ अझै अँध्यारोको घिम्तोमै लिप्त थियो । रातसँग डराएर चिच्याउने किरा, फट्याङ्ग्रा र चराचुरुङ्गी मात्र कराएको सुनिन्थ्यो । त्यसै वरिपरि र माथि रूखमा चढेर त्यो लास हेरिरहँदा जीवनलाई निरस र नरमाइलो लाग्दै थियो । अँध्यारै भएकाले लासको अनुहार देखिँदैनथ्यो । असोजको बेला, त्यसैमा मकैबारी, पुलिसलाई सरजमिन र मुचुल्का उठाउन मुस्किल परेको थियो । तैपनि, जिम्मा पाएको काम पूरा गर्न पूरै खटेको थियो । प्रहरीले गाउलेहरूसँग सोधपुछ गर्न थाले । त्यसै बेला एकजना लासमाथि घोप्टिएर रोइरहेकी महिला जुरुक्क उठेर आफ्नै लोग्नेमाथि खनिई । लोग्नेलाई छातीमै पक्रेर चिच्याउँदै भन्न थाली, “यसै मान्छेले मारेको हो मेरी छोरीलाई । फिदिम बजारमा मजाले पढ्दै बसेकी केटीलाई ल्याएर यसैले मारेको हो । म ठोकेरै भन्छु साप !” यति भनेर महिला घोप्टो परेर बेस्सरी रुन थाली । त्यसरी रुन लागेकी महिला मर्ने केटीकी सानीआमा र त्यो आरोपित मान्छे उसैको श्रीमान् भएको कुरा प्रहरीको सोधपुछ पछि नखुल्ने कुरै थिएन, थाहा भयो । त्यसपछि पुलिसले ती श्रीमान्लाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ अघि बढाए ।
अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै जाने सिलसिलामा जीवनको मनमा चियो पस्यो । आत्तिदै दौडेर रूखैमा चढी लासको अनुहारमा टर्चलाइट बालेर नियाल्दा त ऊ बिलखबन्द भयो । उसले केही बोल्नै सकेन । चेतनाशून्य भइसकेको थियो । सुस्केरा हालेर फुच्…चू..भन्न त खोज्यो तर सकेन । अकस्मात् जीवन रूखबाट तल खस्यो । ऊ गम्भीर रूपमा घाइते भइसकेको थियो । अरू प्रहरी साथीहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरी केटीको त्यो लासलाई प्रहरीकै जिपमा राखे । सानोबा भन्ने आरोपितलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो । त्यही लासको छेउमा घाइते अवस्थाको जीवन मुस्किलले सास फेर्दै करूण नजरले आफ्नी प्यारी फुच्चुलाई नै हेरिरहेको थियो । केही महिनादेखिको उसको एकोहोरो प्रेम…फुच्चु… उही लाटी केटी… जीवनले सोचेको उसको संसार अब यहीँ ध्वस्त भइसकेको थियो । बाँकी थियो त केबल, कहिल्यै निको नहुने उसको मुटुको व्यथा, फुच्चुको कथा ।
जिल्ला अस्पतालमा ल्याएर लासको पोस्टमार्टम गरियो । घाइते अवस्थामा रहेको जीवनलाई पनि त्यसै अस्पतालमा सामान्य उपचार गरियो । आफ्नै बाबु समान सानाबाबाट बलात्कृत भएपछि इच्छा नाम गरेकी केटीले मृत्युको बाटो रोज्न बाध्य भएको प्रहरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको थियो । गाउँले र आफन्तहरूलाई लास जिम्मा लाएर जीवन त्यहाँबाट निःशब्द भएर थाना फक्र्यो । केही खाएन । कापी र कलम हातमा लिएर ऊ लेख्न थाल्यो । बिहानको चार बजिसक्दा उसले एउटा कथा पूरा गरिसकेको थियो । अन्तमा, त्यसै कथाको पहिलो पानामा दुई थोपा आँसु चुहाएर कथाकोे शीर्षक लेख्यो– “लाटीको कथा:- नउघ्रेको जून”
दोस्रो निर्वाचन जेठ ३१ मा नहुने, यस्तो छ प्रमुख दलको निष्कर्ष
गीतकार जानु काम्बाङको गीतको भिडियो सार्वजनिक
इलाम समाज एफ सि सोह्रौ गोर्खा कप विजेता
यी हुन् ‘मिस युके नेपाल २०१७’का अवार्ड विजेताहरु (फोटो फिचर)
ह्यारीकी राजकुमारी अभिनेत्री मेगान मार्कल
क्यान्सरबाट पीडित तीन वर्षीय बालकको लागि रनवे परेडमा सेलिब्रेटीहरुको क्याटवाक